Aya ndiwo anoshamisa uye akasarudzika Pokémon muPokémon Go | IPhone nhau
Aya ndiwo anoshamisa uye akasarudzika Pokémon muPokémon Go
Tichaenderera mberi needu eccentricities, matipi uye trivia nezve Pokémon Go. Mune ino kesi tinokuunzira runyorwa rwe matatu Pokémon ayo iwe ausingazokwanise kutora, nekuti kunyangwe hazvo akaverengerwa muPokémon Go Pokédex, haawanikwe mumutambo. Zvakare seimwe Pokémon izvo zvinoita kuti iwe ufambe kuenda kune mamwe makondinendi kana iwe uchida kuzvibata, sezvo ivo vachizivikanwa se "Exclusive Pokémon", nhengo dzinongoonekwa chete kune mamwe makondinendi uye dzinongogona kubatwa ipapo (kana kuburikidza mazai). Iyi ndiyo yakakurumbira uye yakasarudzika Pokémon muPokémon Go uye hatidi kuti iwe uvarege.
1 Exclusive Pokémon neKondinendi
2 Ngano Pokémon
Exclusive Pokémon neKondinendi
Isu tinotanga navo, aya maPokémon anozoonekwa chete pane imwe kondinendi. Ivo vanogara pamiganhu pakati peimwe neumwe vanozove nazvo zvishoma nyore, kune vamwe, kufamba ndiyo imwe nzira.
America Kuchamhembe: Tauros
Nekudaro, zvese hazvirasike, kunyangwe zvichisarudzika, idzi Pokémon dzinokwanisa kubvambura kubva ku mazai, kunyangwe vari 5 KM kana 10 KM. Kana iwe uchida kuziva kuti ndeipi mhando yePokémon inobhururuka kubva kune yega yega, pinda runyorwa rwedu pa IYI BHUKU.
Isu tichawana zvakare Pokémon yausingazokwanise kubata, ayo anozivikanwa seanozivikanwa uye asiri mune algorithm asi muPokédex. Izvi ndizvo Chinyorwa, Zapdos, Moltres, Mew uye Mewtwo. Izvi zvichave zviripo munzvimbo dzakasarudzika dzinozoziviswa neNintendo. Hapana chinhu kubva kuEverest kana yakafanana nharaunda dzine njodzi. Iyi Pokémon inosanganisirwa mukodhi yemutambo, asi haizoonekwe seyakajairika Pokémon yemusango. Pakupedzisira vashandisi vane hunyanzvi vanozobvumidzwa kuvabata kwenguva yakati rebei, saka kubata idzi Pokémon kuchanetsa uye zvichava pachena kutaura kwenzvimbo iyi Pokémon Go fever ichiripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Aya ndiwo anoshamisa uye akasarudzika Pokémon muPokémon Go
Ricardo Hirales akadaro
Ingori katsamba, ndiArticuno… Kwaziwai!
Pindura Ricardo Hirales
hahaha ndakangoiverenga zvekare uye ichokwadi.
E Garrido akadaro
"Izvi ndizvo Chinyorwa, Zapdos, Moltres, Mew neMewtwo"
Haisi "Chinyorwa" asi Chinyorwa
Pindura kuna E Garrido
Ditto haasi mumutambo futi, kana iwe uchida kuiisa munhau.
Apple Car inononoka kuvhurwa kwayo kwegore, kusvika 2021
PPHelper inotibvumidza kuJailbreak iOS 9.2-9.3.3 kubva kuSafari isina PC kana Mac